ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက် Oxandrolone / Anavar CAS: 53-39-4 အမှုန့် Anavar
အဖြူရောင် crystalloid အမှုန့်
အော်ဂဲနစ် မတည်ငြိမ်သော အညစ်အကြေးများ
သတ်မှတ်ချက်သည် USP30 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။
Oxandrolone သည် အလွန်ရေပန်းစားသော anabolic androgenic steroid ဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် အဖော်ရဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။၎င်းသည် အမျိုးသမီးများကြားတွင် မြင့်မားသောအောင်မြင်မှုနှုန်းကို သယ်ဆောင်ပေးသည့် anabolic steroids အနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို "The Girl Steroid" ဟု မကြာခဏခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ဒါပေမယ့် ဒါက အမျိုးသားတွေမှာ ထိရောက်မှု မြင့်မားတာကြောင့် နည်းနည်းတော့ လွဲမှားစေတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါ၊ ဒါက ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲ အမျိုးသမီးအနည်းငယ်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံပါပဲ။
Oxandrolone သည် ၎င်း၏ အပျော့စား သဘောသဘာဝကြောင့် တန်ဖိုးနည်း anabolic steroids များထဲမှ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်၊ သို့သော် အချို့သော စတီးရွိုက် အသုံးပြုသူများ စွဲကိုင်ထားသော တန်ဖိုးထားမှု ကင်းမဲ့မှုသည် ရယ်စရာကောင်းသော မျှော်လင့်ချက်များ သို့မဟုတ် ညံ့ဖျင်းသော ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဝယ်ယူခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။Oxandrolone သည် ယခင်ကရှိခဲ့ဖူးသမျှ အတုအပအရှိဆုံး steroids များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထုပ်ပိုးခြင်း- တင်းကျပ်စွာ ထုပ်ပိုးခြင်း။
အမြန်ရက် - EMS၊ HKEMS၊ FEDEX၊ DHL၊ UPS၊ TNT၊ ETK၊ EUB
ပို့ဆောင်ချိန်- 24 နာရီအတွင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော အားသာချက်များ
1. ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံ- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အထူးပြုထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စတီးရွိုက်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနီးပါးသို့ တင်ပို့ထားပါသည်။အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ယူကေ၊ ဘရာဇီး၊ ဂျာမနီ၊ ရုရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ဂရိ၊ ပိုလန်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ရူမေးနီးယား၊ နယ်သာလန်၊ ဆွီဒင်၊ ယူကရိန်း၊ လတ်ဗီးယား၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ အိုင်ယာလန်၊ သြစတြီးယား၊ အီရန်၊ တူရကီ၊ မက္ကဆီကို၊ အခြား အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများ၊ ဥရောပ နိုင်ငံများ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံများနှင့် အခြား ဧရိယာများ။
2. ကြီးမြတ်သောအရည်အသွေး- မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှုနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်စျေးနှုန်း။အရည်အသွေးကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှု၏ ပထမအခြေခံဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှုကိုနှစ်သက်သည်။ထို့ကြောင့် သင်၏တောင်းဆိုမှုကို သေချာစေနိုင်သည်။နမူနာများကိုမှာယူရန်ကြိုဆိုပါသည်၊ MOQ က ၁၀ ဂရမ်ပဲရှိပါတယ်။
3. ဘေးကင်းပြီး လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်ခြင်း- ကွဲပြားခြားနားသော သတိပညာဖြင့် ဘေးကင်းသော ထုပ်ပိုးမှုနည်းလမ်းများစွာ၊ အမြန်ရွေးချယ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံ၊ ရောက်ရှိလာရန် 5~7 ရက်အတွင်း၊ အောင်မြင်မှုနှုန်း 99%။
4. အတွေ့အကြုံရှိမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု- ကုန်ကြမ်းမှုန့်များအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟော်မုန်းဖြေရှင်းချက်နှင့် ချက်ပြုတ်နည်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ဆိုက်တွင် ဟော်မုန်းဖြေရှင်းနည်းကို သင်ပေး သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။မည်သည့်ဆွေးနွေးမှုနှင့်မေးခွန်းကိုမဆိုကြိုဆိုပါတယ်။
ယခင်- အရည်အသွေးမြင့် Nandrolone Decanoate / Deca / Durabolin / Durabol ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်း CAS 360-70-3
နောက်တစ်ခု: Melanotan2ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း Peptide လူ့ကြီးထွားမှု 10iu ဟော်မုန်း Mt2 Steroids အမှုန့်
Oxandrolone / Anavar CAS: 53-39-4 အမှုန့် Anavar...